mar kale i ... WWII
Su'aal mar kale i ... WWII
2 sano 1 bil ka hor #278 by PAYSON
Waxaa mar kale aniga. Waxaan ahaa kaliya spitballin 'iyo yaabay haddii ay jiraan uu mar uun isku day ah samaynayaan qaybta WWII ah. Inteeda badan, ninna ma uu dareenka ka mid ah diyaaradaha duulaya oo xiliyo hore. Waxay u badan tahay in uu noqon lahaa waaya aragnimo cusub, si ay dib u off kasta oo hadda ka dibna ka Mach 2 - 3, oo wuxuu ku raaxaysan dareenka of degtey on jir / top guri weyn halkii mucho degtey / Fasto ku tu aaqirkii. Waxaan hadda waxaan waayo, mid raaxaysan lahaa isagoo raxan side yar. (Corsair ee aan hadda haysanno waa badan oo xiiso leh. Waxaan leeyahay model la shubay ah mid ka mid ah nidaamyada rinjiga a.)
2 sano 1 bil ka hor #288 by Gh0stRider203
Waxaan ahay 1000% ay guushu ku this!
2 sano 1 bil ka hor #297 by PAYSON
Kun boqolkiiba? !!!!!? WOW, waa in la TAN UGU SOO SOCDA COMIN 'soconnay; -!]
2 sano 1 bil ka hor #328 by Gh0stRider203
haa waxaan inta badan duuli jumbos for My VA .... laakiin waxaan SAMAYN jeceshihiin Shimbiraha WWII